Siyaasiga Cali Cabdi Awaare oo quudareynaya in laga dhigo Ra'isulwasaaraha dalka
Siyaasiga Cali Cabdi Awaare oo quudareynaya in laga dhigo Ra’isulwasaaraha dalka
Updated About:236 days ago 1
Siyaasiga kasoo jeedo Puntland ee Cali Cabdi Awaare ayaa maanta Muqdisho soo gaaray isaga oo doonaya in loo magacaabo Ra’isulwasaare.
Mr. Awaare oo ah siyaasi caan ah sidoo kalana wasiir kasoo noqday maamulka Puntland ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey garoonka Adan Cadde.
Cali Cabdi Awaare ayaa kasoo noqday wasiir MaamulkaPuntland, wuxuuna ka mid ahaa dadkii aas-aasay Maamulkaas.
Cali CabdiAwaarea ayaa ah Siyaasi intabadan kunoolaa dalka lana qaybsaday shacabka dhibaatooyinka kala duwanaa oo soowajahay, Sidoo kale wuxuu aad u soo dhaweeyay in Soomaaliya ay maanta ka baxday KMG islamarkaana si xalaal ah loo doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Soo dhaweynta kadib ayuu warbaahinta u sheegay inuu aad ugu faraxsan
yahay in maanta uu ka soo dago Garoonka Diyaaradaha ee
“Waan ku faraxsanahay inaan imaado Muqdisho,waxaana ka imid dalkaJabuuti waxaana u imid inaan Shacabka Soomaaliyeed kala qeybqaado isbedelkaSiyaasadeed ee dalka”.
Hadal heynta dadka reer Muqdisho ayaa ahaa maalmihii ugudambeeyay in Cali Cabdi Awaare loo magacaabidoono Ra’iisulWasaaraha Soomaaliya, waxayna bulshada ku dhaqan muqdisho isku raacday inuu yahays haqsi u qalma in loo magacaabo Ra’iisulWasaare.
Ugudambeyntii Cali Cabdi Awaare ayaa sheegay in maan tadalka Soomaaliya looga baahan yahay isbedel Siyaasadeed ee hormarinaya dalka iyod adka, Wuxuuna intaasi ku daray inuu yahay shaqsi sifiican u yaqaana dhulkaSoomaaliyeed iyo Bulshaweynta ku nool ,Wuxuuna sidoo kale xusay in wax badan uu ka bedeli doonto Xaaladda hadda ee ku jirto Soomaaliya, ha ahaato dhinaca Amniga, Dhaqaalaha, Maamul wanaaggai yo xiriirkaCaalamka.
Somali says:	September 25, 2012 at 5:55 am	Waxaan fariin guud u diraya Ummadda somaaliyeed iyo dowladda usub.aniga waxaan dhihi lahaa dagaalkan guud ee Gobol gobalka looma baahna.Waxaa loo baahanyahay in la soo qabto tobanka nin ee shashka ama ganbada haweynka wadata oo madaxda u ah Alshabaab waa kuwa habeen iyo maalin u dhiga BAMKA Ummadda Soomaaliyeed waxay u dagaalamaan waa lacag raadis ee ma ahan diin waa qoladii Axadda, ka immaan dhulkii diinta lagu baran jiray,labaatankii sanoo la soo dhaafayna afka waa u xiranyahay xagee deentu joogtaa waaba tuug afxiran oo meelna ka shaqeyn ummadda xoolohooda rabo in uu ku noolaado isku qariyo diin, ninkastoo waalan ku soo xira BOMB..Aniga waxaan dhihi lahaa Jaalle Madaxweyne ummadda ka aruuri Hubka ay ku heestaan Guryohooda Magaalooyinka dowlada gacanta ku heyso (dil , xabis da’in , qofkii lagu arku hub isagoo heysto mudada loo qabto ka dib).